နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၂၁.၁၀.၂၀၂၀ – Sports A2Z
နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၂၁.၁၀.၂၀၂၀
–	ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ အနိုင်ရခဲ့တာဟာ နည်းပြ အိုလီဂန်နာ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ နည်းဗျူဟာပိုင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း အနိုင်ဂိုးရှင်တိုက်စစ်မှူး မားကပ်စ် ရက်ရ်ှဖို့ဒ်က ချီးကျူးလိုက်ပြီး အသင်းအနေနဲ့ တိုက်စစ်ခံစစ်ကို ဟန်ချက်ညီညီကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆို။
–	ဂိုးသမား ဒေးဗစ် ဒဟေးယား ပီအက်စ်ဂျီနဲ့ပွဲက တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ ထိုးဖောက်ကန်သွင်းချက်တွေကို ကာကွယ်သွားတဲ့ လက်စွမ်းကို ပရိသတ်တွေ ချီးကျူးခဲ့ကြပြီး အန်တိုနီ မာစီယယ်လ်ရဲ့ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းမှုသာ မရှိခဲ့ရင် Clean Sheet ရမယ့် ခံစစ်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့။
–	ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ အနိုင်ရလိုက်တာဟာ ပြိုင်ပွဲစုံမှာ အဝေးကွင်းနောက်ဆုံးဆယ်ပွဲဆက် အနိုင်ရရှိမှုလည်းဖြစ်ပြီး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အဖို့ သမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ရရှိခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့။
–	မျက်စိမှုန်တဲ့ ပြဿနာရှိနေလို့ မျက်ကပ်မှန်တပ်ကစားနေရတဲ့ ကွင်းလယ်လူ စကော့ မက်တော်မီနေးအနေနဲ့ ပီအက်စ်ဂျီနဲ့ ပထမပိုင်းမှာ မျက်ကပ်မှန်တစ်ခုကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး တစ်ဖက်သာ သေသေချာချာမြင်ပြီး ကစားခဲ့ရပေမယ့် ကစားပုံကောင်းမွန်ခဲ့တယ်လို့ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား ချီးကျူး။
–	နောက်ခံလူသစ် အဲလက်စ် တဲလက်စ်ရဲ့ ပီအက်စ်ဂျီနဲ့ ပွဲမှာ ပြသခဲ့တဲ့ ခြေစွမ်းကို တိုက်စစ်မှူး ရက်ရ်ှဖို့ဒ် ချီးကျူးသွားပြီး ဘရာဇီးလ် လက်ရွေးစင်အနေနဲ့ ဘယ်တောင်ပံမှာ အတက်အဆင်း ကစားပုံကောင်းခဲ့သလို တည်ကန်ဘောတွေမှာလည်း တိကျခဲ့။
–	ဒုတိယပိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ အနိုင်ဂိုးလိုချင်လို့ ဖိကစားခဲ့တဲ့ ပုံစံကို နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ အခွင့်ကောင်းယူသွားပြီး တန်ပြန်တိုက်စစ်တွေနဲ့ ထိုးနှက်သွားခဲ့ပုံက ပါးနပ်မှုကို ပြသခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပီအက်စ်ဂျီရဲ့ ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူဟောင်း အန်ဒါ ဟာရဲရား ချီးကျူး။
2 – Both instances ofaFrench player scoring an own goal againstaFrench club in the Champions League have been at the Parc des Princes against PSG – Jeremy Mathieu for Barcelona in April 2015 and Anthony Martial for Man Utd today. Bleu. #PSGMUN pic.twitter.com/Jo4FfOZfJO
–	အန်တိုနီ မာစီယယ်လ်ကတော့ အသင်းနဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးကို ရေးထိုးသွားခဲ့ပြီး ပီအက်စ်ဂျီအတွက် Parc des Princes မှာ Own Goal သွင်းပေးတဲ့ ဒုတိယပြင်သစ်ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သလို ယူနိုက်တက်အတွက် ၉ ဂိုးမြောက် ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းမှုနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့ စံချိန်ဆိုးဖြစ်ခဲ့။
–	ပီအကျဈဂြီအသငျးကို အဝေးကှငျးမှာ အနိုငျရခဲ့တာဟာ နညျးပွ အိုလီဂနျနာ ဆိုးလျရှားရဲ့ မှနျကနျတဲ့ နညျးဗြူဟာပိုငျးကွောငျ့ဖွဈကွောငျး အနိုငျဂိုးရှငျတိုကျစဈမှူး မားကပျဈ ရကျရျှဖို့ဒျက ခြီးကြူးလိုကျပွီး အသငျးအနနေဲ့ တိုကျစဈခံစဈကို ဟနျခကျြညီညီကစားနိုငျခဲ့တယျလို့ဆို။
–	ဂိုးသမား ဒေးဗဈ ဒဟေးယား ပီအကျဈဂြီနဲ့ပှဲက တဈဖကျအသငျးရဲ့ ထိုးဖောကျကနျသှငျးခကျြတှကေို ကာကှယျသှားတဲ့ လကျစှမျးကို ပရိသတျတှေ ခြီးကြူးခဲ့ကွပွီး အနျတိုနီ မာစီယယျလျရဲ့ ကိုယျ့ဂိုးကိုယျသှငျးမှုသာ မရှိခဲ့ရငျ Clean Sheet ရမယျ့ ခံစဈကိုလညျး ပိုငျဆိုငျခဲ့။
–	ပီအကျဈဂြီအသငျးကို အဝေးကှငျးမှာ အနိုငျရလိုကျတာဟာ ပွိုငျပှဲစုံမှာ အဝေးကှငျးနောကျဆုံးဆယျပှဲဆကျ အနိုငျရရှိမှုလညျးဖွဈပွီး မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအဖို့ သမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျ ရရှိခဲ့တဲ့ မှတျတမျးကောငျးတဈခုလညျးဖွဈခဲ့။
–	မကျြစိမှုနျတဲ့ ပွဿနာရှိနလေို့ မကျြကပျမှနျတပျကစားနရေတဲ့ ကှငျးလယျလူ စကော့ မကျတျောမီနေးအနနေဲ့ ပီအကျဈဂြီနဲ့ ပထမပိုငျးမှာ မကျြကပျမှနျတဈခုကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပွီး တဈဖကျသာ သသေခြောခြာမွငျပွီး ကစားခဲ့ရပမေယျ့ ကစားပုံကောငျးမှနျခဲ့တယျလို့ နညျးပွ ဆိုးလျရှား ခြီးကြူး။
–	နောကျခံလူသဈ အဲလကျဈ တဲလကျဈရဲ့ ပီအကျဈဂြီနဲ့ ပှဲမှာ ပွသခဲ့တဲ့ ခွစှေမျးကို တိုကျစဈမှူး ရကျရျှဖို့ဒျ ခြီးကြူးသှားပွီး ဘရာဇီးလျ လကျရှေးစငျအနနေဲ့ ဘယျတောငျပံမှာ အတကျအဆငျး ကစားပုံကောငျးခဲ့သလို တညျကနျဘောတှမှောလညျး တိကခြဲ့။
–	ဒုတိယပိုငျးမှာ သူတို့ရဲ့ အနိုငျဂိုးလိုခငျြလို့ ဖိကစားခဲ့တဲ့ ပုံစံကို နညျးပွ ဆိုးလျရှားအနနေဲ့ အခှငျ့ကောငျးယူသှားပွီး တနျပွနျတိုကျစဈတှနေဲ့ ထိုးနှကျသှားခဲ့ပုံက ပါးနပျမှုကို ပွသခဲ့တာဖွဈကွောငျး ပီအကျဈဂြီရဲ့ ယူနိုကျတကျကှငျးလယျလူဟောငျး အနျဒါ ဟာရဲရား ခြီးကြူး။
–	အနျတိုနီ မာစီယယျလျကတော့ အသငျးနဲ့ မှတျတမျးဆိုးကို ရေးထိုးသှားခဲ့ပွီး ပီအကျဈဂြီအတှကျ Parc des Princes မှာ Own Goal သှငျးပေးတဲ့ ဒုတိယပွငျသဈကစားသမားဖွဈလာခဲ့သလို ယူနိုကျတကျအတှကျ ၉ ဂိုးမွောကျ ကိုယျ့ဂိုးကိုယျသှငျးမှုနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျရဲ့ စံခြိနျဆိုးဖွဈခဲ့။
နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၂၁.၁၀.၂၀၂၀